NISA oo sheegtay inay Muqdisho ku qabatay xubno ka tirsan Shabaab | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta NISA oo sheegtay inay Muqdisho ku qabatay xubno ka tirsan Shabaab
NISA oo sheegtay inay Muqdisho ku qabatay xubno ka tirsan Shabaab
Hay’adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay hawlgal gaar ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho in lagu qabtay xubno sar sare oo ka tirsan ururka Al Shabaab.
Qoraal NISA ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayaa waxa ay ku sheegtay hawlgal laga sameeyey xaafad ka tirsan degmada Dharkenley in ciidamada ammaanka ay ku qabteen laba ka mid ah ragga dilalka u qaabilsan Al Shabaab.
Warka ka soo baxay NISA laguma shaacin magacyada raggan, iyada inta uu hawlgalkan socday aanay jirin khasaare rayidka iyo ciidanka ammaanka soo gaaray.
NISA ayaa sidan tiri “19-ka Sabtembar, 2018, ciidamada amniga ayaa laba shakhsi oo amniyaat-ka Al Shabaab ah ka soo qabtay degmada Dharkeynley ee Magaalada muqdisho, hawlgalka cidi wax kuma noqon, nagu garab istaaga si aan u difaacno dhammaan shacabkeenna.”
Hawlgalada ciidamada ammaanka ay ka sameynayaan magaalada Muqdisho ee lagu soo qabto xubnaha ka tirsan Al Shabaab ayaa maalmahan dambe kordhay, iyada oo aanay jirin ragga la soo qabto in warbaahinta loo soo bandhigo.